Ntuziaka Pagechọ Pagegagharị Page na-abawanye ọnụego ntụgharị | Martech Zone
O doro anya na iwepụta ibe ọdịda bụ ihe bara uru maka ahịa ọ bụla. Ndị mọnk Email etinyela nke a ihe omuma ihe omuma zuru oke na ọdịda ọdịda atụmatụ njikarịcha nke na-eme ka nsonaazụ dị mma. Lee ụfọdụ ezigbo stats jikọtara na ọdịda peeji nke njikarịcha.
Onye isi ala Barrack Obama welitere nde $ 60 ọzọ site na enyemaka nke ule A / B
Ogologo ọdịda ọdịda nwere ikike ịmịpụta ihe ruru 220% karịa na-eduga karịa n'elu okpukpu oku na-aga-ime
48% nke ndị na-ere ahịa na-ewu ọhụụ ọhụụ maka mgbasa ozi ahịa ọ bụla
Ndị ụlọ ọrụ edekọwo mmụba nke 55% na ndu ha mgbe ha bawanye peeji ọdịda site na 10-15
Nnwale A / B egosila na ọ bụ usoro kachasị ewu ewu maka imeziwanye mgbanwe ntụgharị
Gmail nwalere ụdị dị iche iche nke acha anụnụ anụnụ dị ka ịchọpụta otu ndo maka CTA ha nke gbanwere kachasị
Nchọpụta ha mezue na-enye ndepụta zuru ezu maka ntinye akwụkwọ njikarịcha atụmatụ:
Ndị mmadụ - mata njirimara nke ndị na-ege gị ntị ma gwa ha okwu.
Focus - nye otu nlebara anya na peeji ọdịda ma wepu ozi ọ bụla na-adịghị mkpa.
Isi okwu - Nke mbụ 3 sekọnd bụ nke isiokwu nke ibe ahụ ga-abụ onye isi ọkwọ ụgbọ ala ma ndị ọbịa ịnọ ma ọ bụ na ha anọghị.
Na-etinye nnomi - Usoro akara ọ bụla kwesịrị ịba uru ma chụpụ akụkọ ụlọ ga-eme ka ịtụgharị gbanwee.
Kpọọ-na-Action - Chepụta CTA doro anya nke mara mma ma na-agbanwe ntụgharị.
direction - Nye nduzi ka ndị ọbịa ụgbọala ha site na a akakabarede. Gwa ha mgbe, otu na ihe ichere.
Tule - Mee ka CTA gị pụọ na peeji ndị ọzọ ka ị wee nwee nghọta doro anya maka onye ọbịa gị na ihe ọzọ ị ga-eme.
nleba - Nye ihe ntụkwasị obi dịka akaebe iji kwalite ọnụego mgbanwe gị.
Nnukwu ikuku - A-arụsi ọrụ ike na peeji nke na-adọpụ uche ọcha nwere ike hapụ uche nke ndị ọbịa gị. Mee ka ihe ghere oghe ma dịkwa mfe.
Agba - Agba na-ebute mmeghachi omume mmetụta uche. Hụ na ị nyochachara agba gị ma kwekọọ na ha na omume ị na-achọ ịrịọ.
Videos - Nwaleenụ vidiyo na peeji nke ọdịda gị iji mụbaa ọnụego ntụgharị.
Ihe ngosi efu efu - Ọ dị iche na ndị asọmpi gị wee kọwaa uru nke ntugharị maka ndị ọbịa gị.
Mmekọrịta Mmekọrịta - Nwalee popup ma ọ bụ ihe omume ndị ọzọ na ibe nwere ike ịkpalite mmasị ma mụbaa ntụgharị.
Ngalaba-Mbọn - Bulie gị ikwesị ntụkwasị obi site na-eweta na ahịa ma ọ bụ onye branding na nwere ike ghọtara site gị vistors.
Nnwale A / B - nwalee ụdị ọ bụla dị na peeji ọdịda gị iji chọpụta oke mmetụta na ntụgharị ntụgharị.
Nkewa - mee mgbanwe nke peeji ọdịda gị ezubere iche na ọwa dị iche iche.
Ihe ịma aka ndị a niile na-agbadata n'eziokwu na peeji ọdịda gị kwesịrị ịrịọ ma na-etinye aka maka onye ọrụ iji laghachite ma rụọ ọrụ achọrọ. Enweghi mkpirisi iji nweta ọganiihu azụmaahịa kacha mma. Ọ bụ ebe dị anya, mana ọ na - amalite site na otu atụmanya gị ga - esi soro gị wee nwee ike ijikọ gị. Ibe ọdịda bụ ihe kachasị mma iji chọpụta nke a.
Tags: ule ulekpọọ ka emeagbactaElekwasị anyaọdịda pageọdịda peeji nkeibe editọ peejiimebe peejiNtuziaka peeji nke ọdịdaọdịda peeji nke iheọdịda peeji nkeIsi mmalite peeji peejiAtụmatụ ịchọta njikarịcha peejiọdịda peeji nkeule peejinjikarịchanjikarịcha njikarịchanyocha mmadundị mmadụotu na-elekwasị anyatestimonialspụrụ iche na-ere echicheeririvideos